गर्बिलो सभामुखका अन्य सम्भावना नभएकै हुन् -टेकराज पौडेल | Nepalese Diaspora
अहिले नेपालमा सभामुख छान्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । यहि सन्दर्भमा सबैका आ-आफ्ना विचार र रोजाई छन् । यसभित्र केहि कारणहरु पनि छन् ।
मेरो बिचारमा सभामुख सम्सद्को प्रमुख नेता हो । संसदीय मर्यादा र त्यसका पालना गराउन उसको मुख्य भूमिका हुन्छ । उसको चाल र चरित्रले संसद्को मात्र होइन देशकै दिशानिर्देश हुन्छ । यस्तो व्यक्ति विवादरहित हुनुपर्छ र सबैको बिस्वास जित्ने समन्वयकारी हुनु जरुरी हुन्छ भन्ने आम बुझाई छ । र संसारमा सभामुख पात्रको खोजि पनि यस्तै ब्यक्ति मध्येबाट गरिन्छ । सभामुखको क्षमताले हाउसलाई निस्पक्ष ढङ्गबाट चलाउन सक्ने कमान्डिङ्ग पावर भएको हुनु पर्दछ । उसको कार्य सम्पादन गर्न सक्ने क्षमता पनि अब्बल हुनुपर्छ ।
हिजो मात्र सभामुखमा सिफारिस हुनु भएका सापकोटा विरुद्ध अदालतमा मुद्धा चलिरहेको छ र त्यो फैसला हुन बाँकी छ भन्ने व्यापक हल्ला छ । भलै यो कुनै जनयुद्धकालिन मुद्धाहरूका सन्दर्भमा आयोगहरू मार्फत् टुंगो लगाउने प्रक्रिया बाँकी नै छ । आरोप लाग्दैमा उहाँ ठिक ब्यक्ति होइन भन्न मिल्दैन ।
तरपनि सभामुख जस्तो विधिको शासन र संसदीय पद्धति पालना गराउने जिम्मेवार व्यक्ति विवादमा पर्नु हुँदैन भनेर आवाज उठिरहेको आवाज गलत पनि होइन । सिफारिस गर्ने मान्छेहरुले पनि जनभावना अनुसार सम्सदमा भएका उच्चतम सम्भावनायुक्त ब्यक्तिको छनौट हुन सकेमा मात्र सिङ्गो जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाले गर्बको महशुश गर्दछ भन्ने बुझ्नु पर्दछ। के उच्च क्षमता र गर्बिलो सभामुखको लागि अन्य सम्भावना के थिएनन त नेकपामा ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने ठाउँ देखिएको छ । तथापी पार्टी नेतृत्वले गरेको निर्णयप्रती भने अर्को बिकल्प नआउन्जेल यसैलाई मान्नु बाहेक अरु के भन्न सकिन्छ र !
ओलीका के अपराध छन र कालो झण्डा देखाउने -टेकराज पौडेल
"सुर्य लम्सालको समुह राजनीति र अन्य स्वार्थभन्दा…
लालबाबुहरू निदाएकै हुन् - नगेन्द्रराज पौडेल
महावीर, हुन् या सीताराम, लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्न पाइन्
प्वाँख नउम्रिदासम्म मात्र तिम्रा हुन् ती बचेरा पनि -…
यो पनि पढ्नुहोस : बुढीआँलाई मजेत्रो -दीपक विश्वकर्मा